पैसा बचत गर्न बजेट बनाउने | USAHello | USAHello
बजेट तपाईं हरेक महिना छ र तपाईं भाडामा तिर्नुपर्छ कति पैसा कति पैसा को एक अनुमान छ, उपयोगिता, खाना, यातायात, वस्त्र, आदि. यो तपाईं पैसा बाहिर चलिरहेको बिना खर्च गर्न सक्छन् के बाहिर आंकडा मदत गर्नेछ. भइरहेको बजेट पनि सजिलो पैसा बचत गर्न बनाउँछ.
पैसा कसरी सुरक्षित गर्न, Harsha KR द्वारा फोटो, Creative Commons
बजेट बनाउन आफ्नो पैसा को नियन्त्रण लिएर मतलब. तपाईं सीमित आय मा बाँचिरहेका छौं भने यो विशेष गरी महत्त्वपूर्ण छ. अमेरिकामा, किनभने तिनीहरूले कमाउन भन्दा बढी खर्च धेरै मानिसहरू धेरै पैसा समस्या मा प्राप्त.
कसरी बजेट बनाउन
तपाईंको पे चेक वरिपरि आफ्नो बजेट बनाउन. तपाईं साप्ताहिक भुक्तानी छन्, हरेक दुई हप्ता, वा तपाईंले मासिक? आफ्नो भुक्तानी अवधि वरिपरि आफ्नो बजेट बनाउन.
तपाईंको मासिक वा साप्ताहिक आय लेख्न
मासिक वा साप्ताहिक खर्च सूची बनाउन: खाना, उपयोगिता, भाडामा, बस भाडा वा उदाहरणका लागि कार ऋण
तपाईं तिर्न अन्य खर्च सूची बनाउन: बीमा, मरम्मत बिल, स्कूल खर्च
तपाईं अलग राख्नुपर्छ कति सूची: उदाहरणका लागि तपाईं emergencies लागि पैसा बचत र खरिदका लागि वा यात्रा को लागि सुरक्षित गर्न चाहनुहुन्छ हुनेछ
तपाईं खर्च गर्न चाहनुहुन्छ मनोरञ्जन वा अन्य कुराहरू लागि रकम थप्न. बस यो तपाईं चाहनुहुन्छ कुराहरू अघि आवश्यक कुराहरू किन्न बुद्धिमानी छ सम्झना!
यदि आफ्नो आय आफ्नो सबै लागत कवर गर्दैन, आफ्नो बजेट सन्तुलित छैन. तपाईं आफ्नो आय वृद्धि गर्न सक्नुहुन्न भने, तपाईं कहाँ तपाईं खर्च मा तल कट गर्न आवश्यक हुनेछ.
पैसा बचत र रेकर्ड राख्न
तपाईं आफ्नो खर्च ढाकेका छन् पछि छोडिएका केही पैसा छ भने, बचत सुरु! सबै भन्दा राम्रो पैसा बचत गर्न बाटो आफ्नो बचत खातामा यो राख्दै द्वारा छ. तपाईं आपतकालीन छ भने तपाईं आफ्नो बचत प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ. विशेषज्ञहरु तपाईं आपतकालीन छ महिना बराबर कोष बनाउन सिफारिस’ घटनाको खर्च तपाईं आफ्नो काम गुमाउनु वा प्राप्त घाइते. तपाईं आपतकालीन कोष खडा गरेपछि, त्यसपछि तपाईं पैसा बचत गर्न सक्नुहुन्छ केहि मजा गर्न, जस्तै आफ्नो परिवार संग एक छुट्टी मा जाने वा विशेष केही किन्न.
तपाईं कुनै पनि लेट शुल्क तिर्न छैन भनेर समय आफ्नो बिल सबै भुक्तानी गर्न निश्चित. तपाईं कसरी एक बक्स मा आफ्नो पैसा खर्च आफ्नो महत्त्वपूर्ण रसिद र रेकर्ड सबै राख्न, दराज वा फाइल.
क्रेडिट मतलब बैंक वा क्रेडिट संघ पैसा उधारो र यसलाई पछि तिर्ने. जब तपाईं क्रेडिट प्रयोग पैसा उधारो, रुचि भुक्तानी गर्न हुनेछ, वा पैसा उधारो लागि शुल्क.
यो तपाईं आफ्नो क्रेडिट रक्षा भनेर समय आफ्नो बिल सबै भुक्तानी गर्न महत्त्वपूर्ण छ. तपाईं एक दिन एक घर खरीद गर्न चाहनुहुन्छ भने, क्रेडिट प्रयोग गर्नुपर्ने हुन सक्छ. तपाईं सिक्न सक्छौं थप क्रेडिट कार्ड र ऋण बारेमा.
तपाईं एक क्रेडिट कार्ड प्राप्त गर्न निर्णय भने, प्रत्येक महिना तपाईंको सम्पूर्ण बिल भुक्तानी गर्न धेरै सावधान हुनु आवश्यक छ. तपाईं हरेक महिना तिनीहरूलाई तिर्नको छैन भने क्रेडिट कार्ड उपयोगी हुन सक्छ तर अक्सर तपाईं धेरै उच्च ब्याज चार्ज. तपाईं भन्दा बढी पैसा खर्च नगर्नुहोस्!
के तपाईं थाहा छैन मान्छे पैसा दिने गर्दा सावधान रहनुहोस्, विशेष गरी यदि तपाईं नगद संग तिर्ने छन्. यो चेक भुक्तानी गर्न सक्छन् भनेर बैंक वा क्रेडिट संघ मा एक जाँच खाता प्राप्त गर्न राम्रो छ र तपाईंले बिल तिर्ने प्रमाण छ. तपाईं नगद भुक्तानी गर्न भने, तपाईं भुक्तानी प्रमाण छ भनेर सधैं एक रसिद लागि अनुरोध.
त्यहाँ केही ठगी हो (चाल मान्छे धोखा) यो देश नयाँ छन् र अझै राम्रो अंग्रेजी बोल्न छैन जो कि लक्ष्य मान्छे. तपाईं मेल वा इमेल तपाईं मुद्रा को एक धेरै तिर्नुपर्छ भन्छन् कि प्राप्त वा तपाईं मुद्रा को एक धेरै जित्यो कि यदि, यो एक घोटाला वा नक्कली हुन सक्छ. पोस्ट कार्यालय जाँच, तपाईंको स्वयंसेवक / सल्लाहकार, वा एक विश्वसनीय मित्र वा छिमेकीको तपाईं अनिश्चित हुनुहुन्छ भने.
तपाईं खरीद वा लगानी विचार छ भने, वा केहि तिर्ने, यो लिखित सम्झौता लागि सोध्न स्वीकार्य छ, वा तपाईंले आफ्नो पति कुरा गर्न आवश्यक वा प्रस्ताव सोच्न भन्न. दस्तावेज वा सल्लाह लागि अनुरोध गर्न समय बिना पैसा को एक ठूलो रकम भुक्तानी गर्न दबाब महसुस छैन.
अमेरिकामा, सबैलाई अप्रिल द्वारा रिपोर्ट गर्न आवश्यक छ 15 हरेक वर्ष तिनीहरूले अघि वर्षमा प्राप्त धेरै आय कसरी. त्यो रिपोर्ट कर फिर्ती भनिन्छ. तपाईं आय मा कर योगदान हुन सक्छ. कर पैसा तपाईं प्राप्त सार्वजनिक सेवाहरू लागि सरकार तिर्न छन्, आफ्नो बच्चाहरु र ड्राइभमा सडक लागि स्कूल जस्तै. तपाईं सिक्न सक्छौं कर र कसरी कर तिर्न बारेमा थप. तपाईंले कति पैसा आधारमा, तथापि, तपाईं एक फिर्ती प्राप्त हुन सक्छ (पैसा सरकारबाट फिर्ता) कर मा तपाईं पहिले नै वर्षमा भुक्तानी.
जब तपाईं एक पे चेक प्राप्त, केही पैसा केही कर ढाक्न यो बाहिर लगिनेछ. तपाईंको तर्फबाट सरकारलाई दिन तपाईंको कर्मचारी आफ्नो पे चेक केही पैसा राख्न हुनेछ. यो रोक्काको कर भनिन्छ. यो राज्य र संघीय कर समावेश, बेरोजगारी बीमा र सामाजिक सुरक्षा, जो अवकाश वा अशक्तता लागि बचत छ.
यो वेल्स फार्गो देखि एक नमूना पे चेक छ “बैंकिंग मा हात” कार्यक्रम.
बैंकहरू बारे जानकारी